Iska Ilow Lionel Messi, Ivan Rakitic Oo Xiddiga Sannadka Adduunka U Magacaabay Xiddig U Ciyaara Kooxda Ay Xafiiltamaan Ee Real Madrid
Iska ilow Lionel Messi, Ivan Rakitic ayaa xiddiga adduunka ugu fiican u magacaabay ciyaaryahan u dheela Real Madrid, waana Luka Modric oo ay xulka Croatia kawada tirsan yihiin.
Xiddiga khadka dhexe ee Barcelona ayaa amaanay xiddiga Real Madrid Real Madrid isagoo ku tilmaamay xiddiga ugu fiican dunida sannadkan ka dib howshii uu u qabtay kooxdiisa iyo wadankiisa.
Modric ayaa u maamulayay khadka dhexe Real Madrid iyo Croatia isagoo la qaaday kooxdiisa Champions League halka wadankiisa uu kabtan u ahaa uu markii ugu horeysay abid gaarsiiyay finalka Koobka Adduunka.
“Luka haatan waa xiddiga ugu weyn La Liga, waa ciyaaryahanka ugu fiican dunida sannadkan, haddii aan nahay dadka reer Croatia waan ku faaneynaa” ayuu Rakitic u sheegay Novi List.
“Waxaan rajeynayaa inuu ku guuleysto abaalmarinta ugu danbeysa ee Ballon d’Or sababtoo ah waa uu u qalmaa.”
Modric ayaa hantay abaalmarinta xiddiga sannadka adduunka ee UEFA isagoo ka qaaday Mohamed Salah iyo Cristiano Ronaldo, waxaana uu 32 jirkaan u sharaxan yahay abaalmarinta kale ee xiddiga sannadka adduunka ee FIFA halka sidoo kale la filayo inuu ka mid noqon doonto raga u tartamaya abaalmarinta Ballon d’Or.
Rakitic ayaa hadalkiisa raaciyay: “Kuwa ka maseyrsan Luka, ha u dhinteen maseyrkooda.
“Waan ku faanayaa isaga, waxaana ugu faraxsanahay sida inaan aniga ku guuleysanayo abaalmarinadaas.
“Waxaan xulka qaranka u wada ciyaareynay 11 sannadood, wax badan ayaan isla soo marnay, waxaan u jeclahay sida walaalkey.
“Waan ku faraxsanahay inaan go’aansaday inuu ka sii mid ahaado xulka qaranka, ma garanayo wixii uu go’aankeyga noqon lahaa haddii uu ciyaaraha ka fariisan lahaa.”
Jose Mourinho Oo Ku Xalliyey Xiisaddii U Dhexeysay Pogba Qaabkii Uu Sir Alex Ferguson U Adeegsaday Ronaldo 2008 , Maxaa Lagu Heshiiyey?
Pogba wakiilkiisa Mino Raiola ayaa isku dayey in uu ka kaxeeyo kalyantigiisa United xagaaga xilli ay Barcelona xiiseeneysay laacibka.
Laakiin United ayaa meesha ka saartay iibka Pogba iyada oo waxyar uun ka hor dib ugala soo wareegtay Juventus marka laga yimaado xiisadda muuqata ee u dhexeysa Mourinho.
​Waxaa la fahansan yahay wixii intaa ka dambeeyey Pogba uu wadahdalo la yeeshay Mourinho oo ku saabsan xaaladdiisa iyaga oo gaadhay heshiis iyada oo mustaqbalkiisa laga wada hadli doono xagaaga dambe.
Sidan oo kale Sir Alex Fergsuon ayaa kulan ula yeeshay Cristiano Ronaldo 2008dii, ugu dambeyn u ogolaaday in uu Real Madrid sanadkii xigay ku biiro.
Real Madrid waxa ay Ronaldo ku iibsatay waqtigaas aduun dhan £80million.
Toni Kroos Oo Jawaab La Yaab Leh Ka Bixiyey Su’aal Laga Weydiiyey Kan Ugu Kan Ugu Wanaagsan Ronaldo, Luka Modric & Mohamed Salah
Filipe Luis waxa uu u sheegay Globoesporte “Abaalmarinta ciyaaryahanka aduunka ugu fiican, aniga ahaan maanta waa Messi. Sida sanadkii hore oo kale.
“Markii uusan halkaas joogin, kalsoonida ayaa lumeysa. Macno ma leh cidda ku guuleysata koobka aduunka ama Champions League. Isaga ayaa ugu wanaagsan.”
Sidoo kale waxa uu wax laga “Xumaado ku tilmaamay” in ciyaaryahan France ka tirsan ee ku soo guuleystay koobka aduunka aysa ku jirin liiskan sida Kylian Mbappe, Raphael Varane.
Go’aanka waa la gaaray, markaa mid ka mid ah saddexdaas ayaa gacanta ku dhigi doona abaalmarinta qaaliga ah dhammaadka bishan.
Toni Kroos ayaa lagu weydiiyey Twitter-ka in uu daaha ka rogo qofka uu is leeyahay wuu ugu wanaagsan yahay saddexdaas iyo qofka uu aaminsan yahay in uu ku guuleysanayo abaalmarintaas.
Dabcan Kroos waxa uu koox wadaag la yahay Luka Modric iyo Cristiano Ronaldo ilaa iyo xagaagan kahhor inta uusan ka dambe aadin Juventus.
Ma jiro xiriir uu la leeyahay Salah laakiin waxa ay u muuqataa in uu dhabbaha diblomaasiyadda raacay isaga oo ka gaabsaday in uu si toos ah uga jawaabo su’aasha.
Hase ahaatee, waxa uu ku jawaabay “Aniga Miyaan ka Maqannahay?” sida in uu isu maleenayey in uu ka md ahaa saddexaas isugu soo haray abaalmarinta.